Ndụ ka mma site na ezigbo ndị enyi. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ndụ ka mma site na ezigbo ndị enyi, nke ahụ bụkwa eziokwu! N’agbanyeghi na anyi nwere otutu mmadu no anyi gburugburu, enwebeghi otutu ndi mmadu ndi ji anyi egwuru egwu n’ezie. Ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụghị mmadụ niile ga-anabata gị dịka ị dị!
Ndụ kacha mma mgbe inwere ezigbo ndị enyi gị gbara gị gburugburu, ndị kwere nkwa na ị ga-anọnyere gị n'ọnọdụ ọ bụla, ha na-emekwa ya n'agbanyeghị nsogbu ndị ị ga-enwetara na ndụ.
Ofzọ nke ndụ adaghị, ọ na-ejupụta na elu, ma mgbe inwere ezigbo ndị mmadụ n'akụkụ gị, ọ bụ ya mere ha ji ewe iwe dị ka ihe na-agaziri gị.
Akpachapụla anya n’ezigbo ndị enyi gị, ma gbaa mbọ hụ na ha nọnyeere gị mgbe niile, n’ihi na ha ga-enye gị ike mgbe ike gwụrụ gị. Ezi ndị enyi na-eme ka anyị bụrụ ndị a kpaliri mgbe niile mgbe anyị nwere enweghị ntụkwasị obi na onwe anyị.
Ha bụ ihe mere eji bulie anyị ike na ike anyị niile ọzọ. N'ezie ndụ dị mma karịa, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ dị anyị ka ọ ka mma mgbe anyị nwere nnukwu ndị dị otu a.
Mgbe ezigbo ndị enyi gbara gị gburugburu, mara na ị ga-enwerịrị azụ ha n'ọgwụgwụ nke ụbọchị. Ọ bụghị ndị bụ ezigbo ndị enyi na enyere gị aka n'ụzọ ego, kama ọ bụ ha bụ ndị guzo n'akụkụ gị ọbụlagodi mgbe oke mmiri ga-efegide gị.
Ha bụ ndị hụrụ gị n'anya maka ụdị onye ị bụ ma kpalie gị ime nke ọma kwa ụbọchị. Ha bụ ndị kwere na gị ọbụlagodi mgbe ụwa dum na-emegide gị.
Ndị a bụ ndị ibe gị nke ị nwere ike ịme ihe ọ bụla na ihe niile, na-enweghị na-elekọta ihe ọ bụla ọzọ. Ndụ gị ga-aka mma ma gị na ndị a ụdị ịtụnanya ahụ.
Knowmata na ndị a ga-eguzo n'akụkụ gị ọ bụghị naanị mgbe ị nwere obi ụtọ yana n'ogo nke ihe ịga nke ọma gị, mana ha ga-anọkwa ebe ahụ iji kwado gị mgbe ị na-edozi nsogbu ahụ.
Ndụ ga-aka mma mgbe ịmara na ndị a Mkpụrụ obi mara mma dị ebe ahụ iji duzie gị.
Quest Life Quotes
Quotes ka nma
Quates Enyi mara mma
Obi ụtọ Quot okwu
Quotim na enyi
Oge siri ike na-ekpughe ezi ndị enyi Quotes
Njem Na Ndị Enyi Quotes
Quot On Enyi
Quotite Nme Ka I Nwee Mmuta Na Obi Ka O Mma
Ezigbo Enyi na-ekwu okwu enyi
Ezigbo Ndị Enyi Quotes
Ezi okwu ndi enyim
Ezigbo Enyi na-ekwu okwu
Ezi mkpali Quotes
Ezi okwu kwuru
Amamịghe enyi na enyi Quotes
Ọgwụgwụ ọ bụla bụ mmalite ọhụụ. - Amaghi ama
Ọgwụgwụ ọ bụla bụ mmalite ọhụụ. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Enwere ike m agaghị abụ nke kachasị mma, mana m na-anwa ike m. - Amaghi ama
Ihe dị mfe agaghị adịte aka, ihe agaghị adịte aka agaghị adịkwa mfe. - Amaghi ama
Ihe dị mfe agaghị adịte aka, ihe agaghị adịte aka agaghị adịkwa mfe. - Isi okwu ndi amaghi ama: